Nepal Samaya | कैलालीमा कहाँ को अगाडि?
कैलालीमा कहाँ को अगाडि?
धनगढी- १३ स्थानीय तह रहेको कैलालीमा सत्ता गठबन्धनअघि देखिएको छ। कैलालीमा प्रारम्भिक नतिजा अनुसार ५ दलीय गठबन्धन अगाडि देखिएको हो।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागीमध्ये गठबन्धनले हालसम्म जिल्लाका ४ पालिकाको प्रमुख पदमा अग्रता कायम गरेको छ। जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेदवारले मेयरमा अग्रता कायम गरेका छन्।
अहिलेसम्म कांग्रेसका विरेन्द्र भट्टले ६४५ मत ल्याएका छन्। उनलाई नेकपा एमालेका गोकर्ण भट्ट ६२६ मतका साथ पछ्याइरहेका छन्।
घोडाघोडी नगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका खडकबहादुर रावले १८८ मत ल्याएका छन्। एमालेका ममताप्रसाद चौधरीले १२५ मत प्राप्त गरेका छन्।
उता गौरीगंगामा नगरपालिकामा गठबन्धनका माओवादी तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार देवीदत्त कँडेलले ५९ मत पाएका छन्। उनलाई एमालेका पदमसिंह सिङालल ३० मतका साथ पछ्याइरहेका छन्।
यस्तै चुरेमा गाउँपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एसका उम्मेदवार लोकबहादुर सारु र जानकी गाउँपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवार कांग्रेसका परशुराम महतोले अग्रता कायम गरेका छन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले अग्रता लिएका छन्। धनगढीमा १ सय ५३ मतगणना हुँदा हमालले ७७ मत पाएका छन्। यस्तै सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार नृपबहादुर वडले ३५, नेकपा एमालेका रणबहादुर चन्दले ५ मत पाएका छन्।
टीकापुरमा नगरपालिकामा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अगाडि आएको छ। नगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका रामलाल डगौरा थारुले १३७ मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई एमालेका श्याम खत्रीले ६७ मतका साथ पछ्याइरहेका छन्।
कैलारी गाउँपालिकामा भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अग्रता कायम राखेको छ। गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार राप्रपाका होमबहादुर गुरुङले २७० मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रामसमज चौधरीले २४१ मत पाएका छन्।
भजनी नगरपालिकामा भने एमाले अगाडि छ। जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा भर्खरै मतगणना सुरु भएको छ। दुर्गममा रहेको मोहन्याल गाउँपालिकामा भने अहिले पनि मतपेटिका संकलन कार्य भइरहेको छ।
प्रकाशित: May 14, 2022 | 16:43:31 काठमाडौं, शनिबार, वैशाख ३१, २०७९